Ogaden News Agency (ONA) – Midnimo Qasab Ku Dhisan Waligeed Ma Waarin .. Mengestu iyo EPRDF/TPLF iyo Midnimo Ku-Sheega Itobiya
Midnimo Qasab Ku Dhisan Waligeed Ma Waarin .. Mengestu iyo EPRDF/TPLF iyo Midnimo Ku-Sheega Itobiya
Posted by ONA Admin	/ January 15, 2015
Odhaah sax ah oo caalamka ka dhaxaysa ayaa jirta oo dhahaysa – Xoogeenu wuxuu ku jiraa midnimadeena – waana dhab. Hasa ahaatee midnimada umadaha waxay ku timaadaa siyaaba kala duwan. Midnimo kor-ka-muuqad (Artificial) ah iyo Midnimo Dhab ah. Midnimada hore ee kor-ka-muuqadka ah waa midnimo qasab ku dhalata, qasabna lagu ilaaliyo, meesha midnimada dhabta ah ay tahay mid ku dhisan rabitaanka shacabka oo u arka inay noloshooda iyo ilaalinta jiritaankoodaba ay ku xidhantahay midnimadooda. Midnimada hore ee Kor-ka-muuqadka ah, dadka dibadda ka jooga ayay u muuqataa jiritaanka midnimadooda, hasa ahaatee dadka shacabka ah ee ku midaysan nidaamkaa waxay u qaybsan yihiin kuwo midnimada qasbaya oo Daabka Xukunka haysta (Dominant) iyo qaar lagu qasbayo midnimada oo La-Haystayaal ah (Sub-missive).
Midnimada Dhabta ah ee ku dhisan rabitaanka shacabka waa mid waarta, hadday noqoto inay qaybsantana si-nabadgalya ah ku dhamaata. Meesha Midnimada Kor-ka-muuqadka ah aanay ahayn mid waarta, markay noqoto inay qaybsantana waxay kaliftaa dhimasho iyo dhiiga farabadan. Ama waxay ku timaadaa fursad taariikhi ah oo keenta La-haystayaashii inay si nabdoon u xoroobaan. Tusaale waxaan usoo qaadan karnaa Saldanadii Cismaaniyada (Turkish Ottoman) iyo Midowgii Sofietka (USSR), oo ahaa labadaba midnimo Kor-ka-muuqad ah oo ku dhamaaday inay dawlada badan oo xor ah ka hoos baxeen markay fursadaa heleen. Dhanka kale dawladii Fedraalka Yugoslavia (Socialist Fedreal Republic of Yugoslavia) ayaa ku dhamaatay dagaal khadaadh oo kumanaan qof ay ku dhinteen, ka dibna ay qawmiyad walba noqotay dawlad gaar ah ( Serbia, Slovenia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Mont Negro iyo Kosovo).
Hadaan fiirino Itobiya, waxay ka asaasantay Boqortooyadii Axum ee la odhan jiray Abisinya (Abyssinian Kingdom). Si kooban hadaan u sheegno, waxaa ku qoran kutubta taariikhda inay asaaseen qabiilada Xabasha ee soo galay buuraha Waqooyiga Itobiya. Dhulbalaadhsi iyo dagaalo ayay ku fiday boqortooyadaa, waxayna qabsadeen qawmiyadihii dariska la’ahaa ee Oromada, Somalida, Guraage, reer Koonfureed iwm. Dagaaladii ay dhulkaa ku qabsadeen waxaa ugu badnaa oo qaaday boqor Minilik oy u aqoonsan yihiin inuu yahay aabaha Itobiya sameeyay. Laga soo bilaabo taarriikhdaa uu Minilik kusoo duulay shucuubta dariska la’ah ilaa maanta oy kasoo wareegtay in ka badan qarni, shucuubtii la qabsaday waxaa lagu maamulaa Midnimo ah ku dhisan erey bixinta cusub ee Somaliya ee ah –Fad ama ha Fadin waa lagu fadsiin – oo ah qasab ku ogolow.
Midnimada Itobiya waa midnimo Kor-Ka-Muuqad ah oo shucuubta laga xoog badan yahay ay sugayaan fursad ay kaga xoroobaan, taasoo ku iman doonta ama habkay Eretreeya kaga baxday oo ahaa halgan uu dhiig badan ku daatay, ama ku imanaysa habkay ku kala tageen USSR iyo Czechoslovakia.
Mucaaradka Itobiya ee kasoo horjeeda xukunka EPRDF/TPLF ayaan ilaa hadda ka midaysnayn aragtida wadajirka shucuubta iyo qawmiyadaha Itobiya, iyadoo qaarkood ay ugu muuqato in kooxda TPLF ee xukunka haysata ay bilaabeen waxay ku tilmaameen burburka iyo kala taga Itobiya, markay hirgaliyeen nidaamka Fderaalka ah ee ku dhisan qawmiyadaha. Waxaana la ogsoon yahay inuu ahaa Mingistu M/weynihii ugu horeeyay Itobiya ee ku dhawaaqa inuu dalka u qaybiyay 25 Gobol oo leh maamul (Administrative Region) iyo Shan Gobol oo leh Xukun Hoosaad (5 Autonomous Regions). Waxayna kala ahaayeen; Ereteeya, Casab, Tigray, Dirdhabe iyo Ogaden. Waagaa dhamaan Eretria-nka iyo Somalida iyo Tigray-gaba way diideen go’aankaa kasoo baxay baarlamaankii Itobiya (The Shengo), waxayna dalbadeen madaxbanaani buuxda.
Taariikhdan waxaan u xusnay, in aan farta ugu fiiqno mucaaradka qaarkood ee u haysta inay midnimada Itobiya kusii socon karto nidaamkii hore ee ku dhisnaa Xooga ee ahaa – Fad ama ha Fadin – oon dareensiino midnimada nocaa ah in aanay waaritaan lahayn. In aan midowno anagoo wada xor ah iyo inaan daris ahaano anagoo wada xor ah iyo inaan abidkeen dagaalano waxba kama dhaxeeyo.